Dagaalka ganacsiga oo noqday mowduuca ugu saameynta badan shirka G7 | Hangool News
Dagaalka ganacsiga oo noqday mowduuca ugu saameynta badan shirka G7
June 9, 2018 - Written by Hangool News 1
Kala qeeybsanaanta u dhaxeysa Donald Trump iyo hogaamiyeasha kale ee G7-ka ayaa cirka isku sii shareertay.
Hogaamiyaha Mareykanka ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay in Ruushka dib loogu soo celiyo wadamada dhanka warshadha ku hormaray ee G7. Ruusha ayaa laga saaray G7 kadib markii uu isku balaariyay gobolka Crimea.
Balse hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub ee ka soo qeyb galay shirka ay dhamaantood isku raaceen in aysan taasi dhici doonin.
Dagaalka dhanka ganacsiga ah oo uu goordhow bilaabay maamulka Trump ayaa shirka ka noqday mowduuca ugu saameynta badan.
Dalka Canada ayaa dagaalka ganacsiga ee Trump ku tilmaamay in uu yahay mid “sharci darra ah” halka hogaamiyaha Midowga Yurub Tusk uu Trump kaga digay in mowqifkiisa ku aadan ganacsiga, isbedelka cimilada iyo Iran uu yahay mid khatar badan keeni kara.
Si sakataba, kadib markii uu la kulmay mr Trump madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in arrinta ay haatan soo wanaagsanayaso oo weli ay macquul tahay in hormar laga sameeyo dhanka ganacsiga balse fah faahin kama uusan bixin arrintaas.